Man Utd oo diyaar u ah inay iska iibiso Marcos Rojo si ay ula soo wareegto daafac uu jecel yahay Jose Mourinho – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeCIYAARAHAMan Utd oo diyaar u ah inay iska iibiso Marcos Rojo si ay ula soo wareegto daafac uu jecel yahay Jose Mourinho
February 20, 2018 Falastiin Axmed CIYAARAHA 0
Tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa wuxuu doonayaa inuu daafaca reer Argentina Marcos Rojo ka iibiyo kooxda Faransiiska ah ee PSG.
Jose Mourinho ayaana doonaya inuu bedelka Rojo ka dhigo daafaca kooxda Real Madrid Raphael Varane kaasoo ay dib ugu midoobayaan garoonka Old Trafford.
Manchester United ayaa Rojo kaal soo saxiixatay kooxda Sporting Lisbon xagaagii 2014kii, waana daafac boos joogto ah ka heystay kooxihii Louis van Gaal iyo Jose Mourinho.
Laakiin Mourinho ayaa kulamadii ugu dambeeyey keydka dhigay Rojo maadaama uu dhaawacnaa, waxaana booska kala baxay Phil Jones iyo Chris Smalling.
Shabakadda Don Balon ayaana ku warameysa inay Manchester United qorsheyneyso inay iibiso 27 sanno jirkaan, si uu ula soo wareego daafaca kooxda Real Madrid Varane, kaasoo ka mid ah qorsheyaasha suuqa kala iibsiga ee tababare Mourinho xagaaga soo aadan.
716,686 total views, 1,984 views today
716,686 total views, 1,984 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
716,562 total views, 1,985 views today
716,562 total views, 1,985 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
716,591 total views, 1,984 views today
716,591 total views, 1,984 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
716,655 total views, 1,984 views today
716,655 total views, 1,984 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
716,710 total views, 1,985 views today
716,710 total views, 1,985 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]